" Future adoption of competitive workforce,
with workers learning for life and advancing with skills
throughtout the nation. "
" ယှဉ်ပြိုင်စွမ်းရည်မြင့်မာသော လုပ်သားအင်အားစုနှင့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများကို
1. To produce the excellence skilled worker as the driving power of national industrial development and to place them in appropriate fields of career interest.
2. To adjust unbalance of demand and supply of qualified knowledge worker.
၁။ တိုင်းပြည်၏ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိက မောင်နှင်အားဖြစ်သည့် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ်ပေးရန်နှင့် ကဏ္ဍအလိုက် သင့်တော်သည့် လုပ်ငန်းခွင်များတွင် တာဝန်ယူ ထမ်းဆောင်နိုင်စေရန်။
၂။ ပြည်တွင်း ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ လိုအပ်ချက်မညီမျှမှုအား တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဖြည့်ဆည်းပေးရန်။
Creation of technical trained monpower around the nation.
Creation of job opportunities for youth to take up Industrial employment.
Arrangement of technical trained workers to take the test from " National Skill Standard Authority (NSSA) "
Adoption of productivity and quality control techniques at the factories.
Intensification of Research & Development activities for the establishment of competent design and to improve the innovative approach for the future.
နည်းပညာ အရည်အသွေး ပြည်ဝသော လုပ်သားအင်အားစုများ နိုင်ငံအနှံ့ ဖြစ်ထွန်း ပေါ်ပေါက်စေရေး
မျိုးဆက်သစ် ကျွမ်းကျင် လူငယ်ပညာရှင်များအား စက်မှုကဏ္ဍတွင် ပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ရန်။
လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးသော ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များအား မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု " စံ " သတ်မှတ်ပြဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) ထံတွင် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အရည်အသွေး စစ်ဆေးနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးရေး။
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် နှင့် အရည်အသွေး စစ်ဆေး ထိန်းချုပ်သည့် နည်းပညာများ ကျင့်သုံးရန် ပံ့ပိုး ဆောင်ရွက်ပေးရေး။
အနာဂါတ် စက်မှုထုတ်ကုန်များအား တိုးမြှင့် ထုတ်လုပ် နိုင်ရေးအတွက် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမှ တစ်ဆင့် ကိုယ်ပိုင် တီထွင်နိုင်မှု စွမ်းရည်နှင့် အရည်အသွေးများ ပိုမို ထက်မြတ်လာစေရန် အထောက် အပံ့ပေးရေး။
" Deliver Technical and Vecational Education and Training (TVET) and produce the excellence skilled worker to support industrial Development. "
သင်တန်းကျောင်း၏ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ နယ်ပယ်
" နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ ဖော်ထုတ်ဖွင့်လှစ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော်၏ စက်မှုကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ်ပေးခြင်း "
No.1- Industrial Training Centre commits to deliver the quality technical & vocational education training to produce the competent worker around the nation and foster to improve the innovative approach for the future.
We are committed to operating and maintaining our training center under the disciplines and control ofaQuality Management System conforming to the International Standard ISO: 9001-2005 and strive for improvement sustainable towardsateachers training center of excellence (CoE).
We are dedicated to the quality policy that will ensure that its services fully meet the requirements of its customers at all times.
The principles and objectives of the statement of quality policy will be communicated and available to all employees at all times. All employees are able to perform their duties effectively through an ongoing training and development program.
Ensuring that we fully identify the needs and expectation of interested parties and are commitment to the conformity. We constantly review and improve on our services for the benefit of all our customers.
သင်တန်းကျောင်း၏ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ
အမှတ်(၁)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ဆင်တဲ) သည် အရည်အသွေးမြင့်မားသော နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ ဖော်ထုတ် ဖွင့်လှစ် လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်တစ်ဝှမ်း အရည်အသွေး ပြည့်ဝသော ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ်ပေးပြီး အနာဂါတ်အတွက် တီထွင်ဆန်းသစ်သော အလေ့အထများ မွေးမြူသွားနိုင်စေရေးအတွက် ကတိပြုပါသည်။
အမှတ်(၁) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ဆင်တဲ) ၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများကို ISO 9001:2015 နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနှင့်အညီ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် ရေရှည်စဉ်ဆက်မပြတ် တည်တံ့စေရန် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရင်း အနာဂါတ်တွင် စံနမူနာပြ နည်းပြလေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျောင်းဖြစ်လာစေရန် ကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကတိပပြုပါသည်။
အချိန်တိုင်းတွင် (Customer) ဖောက်သည်တို့၏ လိုအပ်ချက်များကို အပြည့်အဝ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ရန် သေချာသော အရည်အသွေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ဦးတည် ချမှတ်ထားပါသည်။
သင်တန်းကျောင်း အရည်အသွေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ၏ အခြေခံသဘောတရား နှင့် ရည်မှန်းချက်များကို သင်တန်းကျောင်း၏ ဝန်ထမ်းများအားလုံး အချိန်မရွေး သိရှိ ရယူနိုင်ပြီး ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လေ့ကျင်သင်ကြားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်နှင့်အညီ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ကြပါသည်။
သင်တန်းကျောင်းနှင့်ဆက်စပ် ပတ်သက်သော အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး၏ လိုအပ်ချက်နှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို သိရှိဖော်ထုတ်ပြီး ၎င်းတို့၏ အကျိုးစီးပွားတိုးတက်စေရန်အတွက် သင်တန်းကျောင်းမှ ဝန်ဆောင်မှုပေးသော လုပ်ငန်းများအားလုံး အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးနိုင်ရန် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆန်းစစ်သုံးသပ်ပြီး တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန် ကတိပြုပါသည်။
No.1 ITC Sinde Occupational Safety Health (OSH) Policy is established for the purposes of protecting the safety and health of the administration of the training center and is committed to providingacrean health enviroment in the campus and be an environmentally responsible member of the community.
Staff and students shall be adequately trained to ensure their competency in the training center., such as rick assessment, incident investigation, and emergency response.
Safety Training Courses and any other appropriate safety related training courses based on prevailing legislation & the findings of the risk assessments.
Personal protective Equipment (PPE) requirement
Teachers and students involved in workshop practical lessons are to use appropriate PPE such as head, hand, face, eye, hearing protections.
Proctive identifications and controls Hazards
Make reasonable effort to eliminate or reduce accidents, by conducting risk assessment and implement risk controls durin their practical work.
Conduct 5S housekeeping regularly to eliminate or reduce hazards in the training center.
All incidents and accidents are to be investigated to determine the root cause(s) so as to avoidarecurrence.
Staff members, students and visitors are communicated, trained and aware of their roles and responsibilities and what to do during an emergency.
Emergency evacuation drills are conducted as per schedule and plan
No.1 ITC Sinde is committed to ensure all safety and health issues in the campus are duly attended to , and make continuous improvement so that staff, students and visitors feel sale during their training, assignments so as to create and sustainastrong Safety Culture and achieve Safety Excellence.
လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် လုံခြုံကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ
အမှတ်(၁)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ဆင်တဲ) သည် သင်တန်းကျောင်းအုပ်ချုပ်မှု ပရဝဏ်အတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းများ၊ သင်တန်းသားများနှင့် ဧည့်သည်များအတွက် ဘေးအန္တရာယ် လုံခြုံကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် ၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်၍ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွှတ်သော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်စေရန်နှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုရှိသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် လုံခြုံကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ချမှတ်ထားပါသည်။
သင်တန်းကျောင်းအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ထားသော လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စံသတ်မှတ်ချက်များကို လေးစားလိုက်နာရန် ကတိပြုပါသည်။
သင်တန်းကျောင်းအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းများနှင့် သင်တန်းသားများအတွက် ဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် အောက်ပါ လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ကတိပြုပါသည်-
လုပ်ငန်းခွင် အေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများ
သင်တန်းကျောင်း၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် သင်တန်းသားများအတွက် Rick Assessment (RA) , Incident Report and investigation (IRI) နှင့် Emergency Preparedness and Response (EPR) ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ တိုးတက်စေရန် လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးပါမည်။
Risk Assessment (RA) ပြုလုပ်ခြင်းမှ ရရှိလာသော သင်တန်း လိုအပ်ချက်များ၊ လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ လိုအပ်သော သင်တန်းများကို အခါ အားလျှော်စွာ သင်ကြားပေးပါမည်။
လုပ်ငန်းခွင် တကိုယ်ရည် ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းများ (Personal Protective Equipment - PPE)
လက်တွေ့သင်ကြားရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး ဆောင်ရွက်နေသော နည်းပြများနှင့် သင်တန်းသားများအားလုံး လုပ်ငန်းခွင်နှင့် သင့်တော်သော တကိုယ်ရည် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ (Personal Protective Equipment-PPE) ၊ဝတ်ဆင်အသုံးပြုစေမည်။
ဘေးအန္တရာယ်များကို ကြိုတင်ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း
လက်တွေ့သင်ကြားရေး လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ဘေးအန္တရာယ် ရင်းမြစ်များကို ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် မတော်တဆ ဖြစ်မှုများကို လျော့ကျစေ (သို့မဟုတ်) ဖယ်ရှားစေပါမည်။
သင်တန်းကျောင်းတွင် 5S စနစ်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် ဘေးအန္တရာယ်များကို လျော့ကျစေ (သို့မဟုတ်) ဖယ်ရှားစေပါမည်။
ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် မတော်တဆဖြစ်ရပ်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း
ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် မတော်တဆ ဖြစ်ရပ်များကို ထပ်မံ မဖြစ်ပွားစေရန်အတွက် ဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းရင်းများကို စုံစမ်းစစ်ဆေး ဖော်ထုတ်ပါမည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး စီမံချက်များချမှတ်ခြင်း
အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် ဝန်ထမ်းများ၊ သင်တန်းသားများနှင့် ဧည့်သည်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့ လုပ်ဆောင်ရမည့် အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို သိရှိပြီး အချင်းချင်း ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လေ့ကျင့် ထားပါမည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် ဘေးကင်းရာသို့ စွန့်ခွာသွားရောက်ခြင်း လေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်များကိုလည်း စီမံချက်ချမှတ်ပြီး စနစ်တကျ လေ့ကျင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။
အမှတ်(၁)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ဆင်တဲ) အနေဖြင့် သင်တန်းကျောင်း အုပ်ချုပ်မှု ပရဝဏ်အတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းများ၊ သင်တန်းသားများနှင့် ဧည့်သည်များ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ခံစားရစေရန်အတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် လုံခြုံ ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို စဉ်ဆက်မပြတ် လိုက်နာ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေသော ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ထွန်းရာ စံပြ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်လာစေရန် ကတိပြုပါသည်။